Galician Zvinyorwa Zuva. 4 Vanyori veGalician nenhetembo dzavo | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: (c) Mariola Díaz-Cano. Portomaior pamhenderekedzo. Bueu. Maodzanyemba ekumaodzanyemba kwePontevedra estuary.
Nhasi ndiyo Galician Zvinyorwa Zuva, asi mamiriro azvino ano ambomisa kupemberera kwayo sevamwe vakawanda gore rino. Iyo Real Academia Galega yambomira chikamu chayo chinoshamisa chevazhinji kwaari 31 October. Mumwedzi iwoyo iyo zvakarongwa zviito yakatsaurirwa kune ferrolan akangwara Ricardo Carvalho Calero anobata nzvimbo mufananidzo. Asi pano ini ndichagadzira kusarudzwa de nhetembo yegumi vanyori veGalician: Cesar Antonio Molina, Blanca Andreu, Carlos Oroza y Miguel D'Ors.
1.1 Iyo soufrière
2.1 Mudiwa wangu
3 Carlos Oroza anobata mufananidzo
3.1 Uyo anobata nhetembo
Kubva kuLa Coruña, ndizvo munyori, muturikiri, purofesa weyunivhesiti, maneja wezvematongerwo enyika uye wezvematongerwo enyika aive Gurukota rezvetsika pakati pa2007 na2009.
Matombo uye madota kubvira kwayedza yadarika.
Matope ari kuvira. Bhaira. Gungwa.
Kurota uku mukutambudzika kwemirazi ine nyeredzi,
yezvikepe zvakatyorwa kusvika nguva dzekutanga dzemasikati.
Runyerekupe rwemiromo yakadzivirirwa
ndisingazive wekutsvoda mumwedzi uno wekuonekana.
Uye nekukurumidza mvura, mhepo, nechimvuramabwe zvakazungunuswa
sezviyo zviri mumakomba edzimba dzedu dzakaboorwa.
Kusvika pamamita zana kukwira kubhururuka kwenjiva,
iyo yakakuvadzwa kupenya mumadota.
Uye chando chakatonyanya kukuvadzwa ne fumaroles.
Uye mazwi achiperekedzwa nedota riri kuvira
munzira dzakasiiwa dzenzizi dzakafa.
Uye citanias zvakare yakavhurika kumakenduru.
Uye magiza akapenya sematsime ane mavara.
Uye kubuda kweiyo steam yakatsanangurwa nekukurumidzira kwetsamba yemanheru.
Zvakare coruñesa, Francis Threshold ndakamuzivisa mumatanho ezvinyorwa akaratidzira basa rake mu nhetembo yemakore 80, iyo yaakahwina mibairo yakati wandei. Mukadzi waJuan Benet, mushure mekunge ave chirikadzi akarega basa kubva kuruzhinji hupenyu. Iyi ndiyo nhetembo yake inomiririra.
Mudiwa wangu, tarisa pamuromo wangu vitriol
uye yangu Ionia hemlock huro,
tarisa iyo yakatsemuka-mapapiro partridge iyo isina imba uye inofa
kuburikidza neRimbaud's thyme renje,
tarisa pamiti kunge tsinga dzinokachidza dzezuva iri
kuchema scythe mvura.
Izvi ndizvo zvandinoona muawa yakadzika yaApril,
Iniwo ndinoona izvi mugirazi chapero,
uye handigone kufunga nezve hangaiwa dzinogara mushoko
kana kunyora tsamba kuna Rilke mudetembi.
Carlos Oroza anobata mufananidzo
De Lugo uye akafukidzwa naiye achangofa Luis Eduardo Aute, Oroza ndiye munyori wekare kwazvo uye we kureba trajectory yakasarudzwa mune iyi sarudzo.
Uyo anobata nhetembo
kana simba rekugadzira
kana chiito chisina chikwereti
Haisi kurongeka kana nguva inotipa mufaro
kuchena kana nhema idzo dzinozvipinza mugungwa mavhawero asina rwiyo
kukosha kusingasviki kwetsoka dzisingagumi dzenzvimbo dzinosangana murwizi rwunotendeuka
parody ndiyo gore
kuchikwereti chake ruoko rwakatambanudzwa ruoko rwakanangiswa kugehena
shiri iri mungozi.
De Santiago de Compostela, ndiye tenured purofesa weSpanish Literature paYunivhesiti yeGranada.
Yakaburitsa mamwe mabhuku pane nhetembo dzemazuva ano dzeSpanish, dzakanangana ne shanda de Manuel Machado.
Kuda, Amandiño, kuti waibva kuCorredoira,
husiku huno hunodzoka sei, iine mwenje wemashiripiti,
iyo yekugezera yemusango, uye nekutengesa kwedu
ndisina kusimira padyo nedanga rine marara nendove
uye rwiyo rwako irworwo, shamwari yemusango, ane makore manomwe-buccaneer
- «Ay, ay, ay, wakakomborerwa chidhakwa» -,
kuenda pasi kwakadzika carballeiras
kunyanyisa, kuomerera uye kupfeka.
Kubva zhizha iro zvese zvakarasika
kunze kweawa iyoyo
iwe wakagara kune yako nyika, isina makarenda;
Ndakapinda mukunhuwirira kwemabhuku matsva.
Kubva kwavari kwakauya nzira iyo - makwara, vanhu maguta-
yakandiunza kune izvi.
Uye zvino zvandino fungisisa hupenyu hwangu
uye ndinoda kukupa zvipo,
chii chichava kwauri, Amandiño, shamwari yezhizha;
chii chichava kwandiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Galician Zvinyorwa Zuva. 4 Vanyori veGalician nenhetembo dzavo
Mabhuku aJulia Navarro